आज फागुन १८ गते आईतबार, तपाईको दिन कस्तो रहला? हेर्नुहोस दैनिक राशिफल! – Hamrosandesh.com
आज फागुन १८ गते आईतबार, तपाईको दिन कस्तो रहला? हेर्नुहोस दैनिक राशिफल!
दिनको प्रारम्भमा नयाँ कार्य आरम्भ गर्ब्न्को लागि तपाई उत्साहित रहनुहुनेछ । शरीर र मनको स्वस्थता पनि दुइगुणा हुनेछ। मित्र तथा आफन्तसँग समारोहमा जानुहुनेछ । तर मध्यान्नपछि कुनै कारणवश तपाईको स्वास्थ्य राम्नरो रहनेछ । खान-पानमा ध्यान राख्नुहोला । दिन मध्यम फलदायी रहेको छ ।
घरको सदस्यसँग तपाई आवश्यक चर्चा-विचारणा गर्नुहुनेछ । घरको सजावटमा र अन्य विषयमा परिवर्तन गर्नको लागि तपाईको रुची बढ्नेछ । मध्यान्नपछि सामाजिक कार्यमा तपाई अधिक रुची लिनुहुनेछ । मित्रवर्गबाट लाभ हुनेछ । आफन्तसँग सम्पर्क बढ्नेछ । सन्तानबाट लाभ होला । नयाँ मित्रताबाट चित्त प्रसन्न रहनेछ । आकस्मिक धन लाभ होला ।
पारिवारिक र व्यावसायिक क्षेत्रमा तपाईको दिन राम्रोसँग बित्नेछ। कार्यभार बढ्नाले स्वास्थ्यमा केहि ढीलापन आउनेछ , तर मध्यान्नपछि तपाईको स्वास्थ्यमा सुधार आउनेछ । मित्रसँग भेट हुनाले आनन्द आउनेछ । सामाजिक कार्यमा तपाईले आफ्नो योगदान दिनुहुनेछ ।
व्यवहार न्यायपूर्ण रहनेछ । निर्धारित गरिएको कार्यलाई गर्ने प्रेरणा मिल्नेछ । क्रोधको मात्रा अधिक रहनेछ । तर मध्यान्नपछि शारीरिक स्फूर्ति तथा मानसिक निश्चितताको कारण तपाई प्रफुल्लित रहनुहुनेछ । व्यावसायिक क्षेत्रमा उच्च अधिकारीसँग आवश्यक विषयमा चर्चा हुनेछ ।
दिनको प्रारम्भमा शारीरिक र मानसिकरुपबाट अस्वस्थता र व्यग्रताको अनुभव हुनेछ । क्रोधको मात्रा अधिक रहनाले मनमुटाव हुनेछ । तर मध्यान्नपछि शारीरिक र मानसिक स्थितिमा सुधार आउनेछ । परिवारमा आनन्दको वातावरण हुनेछ ।
प्रेम र धिक्कारको राग-द्वेष जस्ता भावनालाई छोडेर समतापूर्वक व्यवहार गर्नुहुनेछ । आध्यात्मिक क्षेत्रमा सिद्धि प्राप्त हुनेछ । तर स्वास्थ्यमा शिथिलता र व्यग्रताको अनुभव हुनेछ । क्रोधको मात्रा अधिक रहनेछ जसकारण तपाईको कार्य बिग्रिनेछ । व्यवसायिक स्थलमा कसैको मन नदुखोस यस कुराको ध्यान राख्नुहोला ।
तपाईको दिनको प्रारम्भ आनन्ददायक रहेको छ । विचारमा उग्रता र अधिकारत्वको भावना मनमा रहनेछ । आर्थिक लाभ र यात्रा होला । शत्रुबाट सावधान रहनुहोला । नयाँ कार्यको प्रारम्भ नगर्नुहोला ।
छोटो यात्रा होला । धन-सम्बन्धित योजना बनाउनको लागि समय शुभ रहेको छ । मध्यान्नपछि मित्र तथा आफन्तसँग यात्राको आयोजन गर्नुहुनेछ । खान-पानको लिनुहुनेछ । पारिवारिक जीवनमा आनन्द छाईरहनेछ ।
शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यलाई सम्हाल्नुहोला । अधिक श्रमपछि कार्यमा सफलता मिल्यो भने निराश नहुनुहोला । मध्यान्नपछि समय अनुकुल रहनेछ । शरीरमा उर्जाको संचार हुनेछ । आर्थिक लाभको लागि समय अनुकुल रहेको छ ।
अधिक संवेदनशील रहनुहुनेछ । तपाईको भावनालाई ठेस पुग्न सक्छ ।कुनै कार्यमा शीध्र निर्णय नलिनुहोला । परिवारसँग परस्पर मनमुटाव नबढोस यस कुराको ध्यान राख्नुहोला । कार्य सफलताको लागि अधिक परिश्रम हुनेछ ।
आवश्यक कार्यको निर्णय नलिनुहोला । नयाँ कार्यको प्रारम्भ नगर्नुहोला । मध्यान्नपछि तपाईको मानसिक व्यग्रता वृद्धि हुनेछ । विधार्थीको लागि दिन मध्यम रहेको छ । आमाको स्वास्थ्यको विषयमा चिन्ता रहनेछ।
घर, कुटुम्ब तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा समाधानकारी व्यवहार अपनाउनाले वातावरण तपाईको पक्षमा रहन सक्छ । बोलिमा ध्यान राख्नुहोला । तपाईमा केहि सुधार आउनेछ । तपाई नयाँ कार्य गर्न उत्साहित रहनुहुनेछ । आवश्यक कारणबाट छोटो यात्रा हुनेछ ।